Chhaharaa | ब्राह्मणहरुको रायमा पनि ब्राह्मण विदेशी राहुल सांस्कृत्यायनको विचार
ब्राह्मणहरुको रायमा पनि ब्राह्मण विदेशी राहुल सांस्कृत्यायनको विचार
मोहनदास करमचन्द गान्धी, बाल गंगाधर तिलक चित्पावन र पण्डित जवाहरलाल नेहरु विचारहरु अगाडीकै अंकमा प्रकाशन भैसकेको छ । यहाँ राहुल सांस्कृत्यायनको राय प्रकाश पारीने छ । केदारनाथ उर्फ राहुल सांस्कृत्यायन हिन्दी, इतिहास जगतमा प्रख्यात व्यक्ति हुन् । यीनले सन् १९४२ मा एउटा ग्रन्थ प्रकाशित गरेका छन् । यीनले “मानव समाज” र मध्य एशियाका इतिहास” मा ब्राह्मण विदेशी तथा आक्रमणकारी हुन यो कुरा पुरातात्विक आधारमा स्वीकार गरिएको छ । ब्राह्मणहरु बोल्गा नदीबाट निस्केर सिधा गंगा प्रदेशतिर हमला गर्दै कसरी आए यो विषयमा पाँच हजार सालको इतिहास सरल भाषामा लेखेका छन् । “बोल्गा से गंगा” नामक ग्रन्थमा उनले धेरै सटिक भाषामा लेखेका छन् र उनले लेखेको पाँच खण्डवाला “मेरी जीवनयात्रा”मा उनी सन् १९३०–३१ को दौरानमा सर जोन मार्शलले उत्खनन गरी रहेको हडप्पा र मोहेन्जोदारो हेर्न गएको कुरा लेख्न छुटाएका छैनन् । सर जोन मार्शल त्यस समयको पुरातात्विक उत्खननको लागि नामुद र मशहुर वैज्ञानिक मानिन्थे । सिन्धु सभ्यताको विषयमा विश्व कै ध्यान गएको थियो । मोहेन्जोदारोको ऐतिहासिक वास्तुको विषयमा सांस्कृत्यायनले पहिले पढी सकेका थिए । त्यहाँ उनले केही फोटोग्राफ्स हेर्ने मौका पाए, उनले वास्तु जस्ताको त्यस्तै देखे पछि उनी लेख्छन् । “शहर की सडके, पानी की नालीया, पाँच हजार वर्ष पहले के आर्याे से पुराने सिन्धु बासियों के नागरिक जीवन के उत्कर्ष को वतला रही थी । उनके इटों के घर, इटों के कुएँ, उनके स्नानगार सभी इस् बात के साक्षी थे, कि ताम्रयुग मे भी वहाँ के लोग बहुत समृद्ध जीवन बिता रहेथे ।” हडप्पा तथा मोहेन्जोदारो नगर एवं त्यसको ऐतिहासिक वास्तु सांस्कृत्यायनले प्रत्यक्ष देखे पछि यसको बारेमा “वोल्गा से गंगा” ग्रन्थमा सटिक वर्णन गरेका छन् । वर्णनहरुः–
१. आखिर असुर राजा उनका पुरोहित मूर्ख(अनपढ) थिएनन, उनीहरु हामी आर्यहरु भन्दा चतुर बुद्धिमान थिए । उनीहरुको नगर जस्तो नगर बनाउन उनीहरुसँग धेरै सिक्नु पर्छ । उनीहरुको बजार, उनीहरुको पोखरी, उनीहरुको उच्च विल्डीङ्गहरु, उनीहरुको राजमार्ग जस्तौ निर्मित संरचनाहरु शुद्ध आर्यहरुको भूमिमा कतै पाउन
सकिदैन । आक्रमणको असरले परिव्यक्त नगर और हारिएको नगर पनि हेर्दा हामी आर्यहरुले त्यो पुरानो नगरको मर्मत गर्न चहाए पनि पहिलाको रुपमा ल्याउन नसक्ने निश्चित थियो । उक्त नगर स्वयं शंखरले बसाएको हो जुन देवसुर जस्तो थियो ।
२. युरोशियन ब्राह्मण जंगलि र तर्कवितर्क गर्ने खालका थिए । उनीहरुले सिन्धु जनले लगाएको लुगा देखेर आफूले पनि त्यस्तै लुगा लगाउन सुरु गरेका थिए “सुरुमा वा त्यो भन्दा पहिला आर्य कपासको नाम पनि जानेका थिएनन् । तर यहाँका मानिसहरु कपासको लुगा लगाउथे । गर्मीमा यो पहिरन साह्रै सजिलो हुन्छ ।”
३. युरोशियन ब्राह्मणहरुले सिन्धु सभ्यता माथि क्रुरतापूर्व आक्रमण गरेका यसको बारेमा “असुर–सेनाले आशा गरेका थिएनन् कि कैले(पहेलो फेश भएको आर्यहरु)ले सिन्धुवासी माथि यसरी आक्रमण गर्लान भनेर । कैलेहरुको लामो माला और ठुलठुलो खड्गको सामुन्ने धेरै समय टिक्न सकेनन् । र आर्यबल उनीहरुलाई हराएर मात्र छोड्न चाहदैनथे । उनीहरु यी बासिन्दा काले असुरहरुको बताउन चाहान्थे की कैलेहरु माथि आँखा लगाउन कति खतरा हुन्छ । असर सेनाहरु भागेको देखेर पुरुधानले सार्थको सुचित गर्दा आफ्नो सवारी लिएर पुष्कलावती भन्ने ठाउँमा आई पुगे । असुर सैनिकले जस्तै उनीहरुका नगराधिपतिले पनि यस्तो आक्रमणको आशा गरेको थिएनन् । असुर आफ्नो पुरा शक्ति लगाउने मौका पाउन सकेनन् और आसानीले दुर्ग तथा नगराधिपति कैलेहरुले नियन्त्रणमा लिन सफल भए । कैलेहरु असुरहरुसँग साह्रै निर्दयतापूर्वक पुरुष असुरहरुको निर्मम हत्या गरे । नगराधिपतिहरुलाई नगरको चौरास्तमा लगेर असुर जनताको सामुन्ने एक एक अंग काट्दै मारि दिए । उनीहरुले स्त्रीहरु, बच्चाहरु र व्यापारीहरुको हत्या गरेनन् यदि उस समय असुरहरुलाई दास बनाउने इच्छा भएको भए सम्भव थियो की ती कैले(आर्यहरु)ले यति धेरै कत्ले आम हत्या गर्ने थिएनन् । पुष्कलावतीको धेरै ठाउँहरुमा उनीहरुले आगो लगाएर जलाई दिए । यो असुर–दुर्गको प्रथम पतन थियो । असरहरु र कैले(पहलेलो केशवाला आर्यहरु) बीच महान लडाइ देवासुर संग्रामको यसरी प्रारम्भ भएको थियो ।” (शंवर असुरहरुको राजा हुन जसलाई इन्द्र भन्ने कैलेले मारेका थिए– ऋग्वेद)
४. सिन्धुजनको भाषाः– असुरहरु आफ्नो ठुलाठुला नौकाहरु निर्भय भएर चलाउथे । वर्षाै–महिनौंको बाटो जान्थे र सागरबाट नाना थरिकाको रत्नहरु बटुलेर ल्याउथे । असुरहरुको सहास र चतुराईको एक नमुना मान्न सकिन्छ । असुरहरु मुखले नबोली वातचीत गर्न माहिर थिए ।
माटो, पत्थर, जनावरको छालामा एक असुर केही चिन्ह खिचेर छोड्दा अरु असुरहरु सारा बात बुझ्दथे । जति अरुले दुई घण्टा जति बोलेर बुझ्न मुश्किल पर्ने बात त पाँच दश चिन्ह खिचेर बताउन सक्थे । यो कुरा आर्यहरुको कहिले पनि थाहा हुन
सकेन । अब आर्यहरु उक्त चिन्हहरु सिक्न खोजी रहेछन् तर वर्षाै लगाउँदा पनि उनीहरुले सिक्न सकिरहेका छैनन् ।” “त्यसैले जरुर असुरहरु धेरै नै विद्वान र चतुर थिए ।”
यी तमाम कुराबाट यहि सिद्ध हुन्छ की युरोशियन स्टेप९ध्भकत क्ष्दभचष्बल ँयचभकत श्यलभ० प्रदेशबाट आएका ब्राह्मण कति जंगली, वहशी त्यस्तै जालिम पनि थिए । योरोपमा गएको युरोशियन स्टेप जंगली आर्यहरुले वहाँको मानिसहरुको कत्लेआम गरे । वहाँका समाज उन्नत विहित थिए उनीहरुलाई लुटे र उनीहरुको महिलाहरुसँग सम्भोग गरेर त्यहाँ नयाँ प्रजातिको जन्म दिए । जुन स्थानमा पुरानो सभ्यता थियो उनका नाश यही जंगली युरोशियनहरुले
गरे । इण्डियामा यिनीहरुले सिन्धुवासीको पुरुषहरुको कत्लेआम गरेका थिए । यिनीहरुले यस स्थानमा वर्णव्यवस्था निर्माण गरेर यहाँको जनताको शुद घोषित गरेर गुलाम बनाए । दुर्गा भगवान तथा मधुकर ढवलेहरुले खुंखार ब्राह्मणहरुको कुकर्मको खुलेर समर्थन गरेका छन् । उनीहरु भन्छन् यो जाति व्यव सिन्धुवासी आफैले बनाएका हुन भनेर तर्क दिन्छन् । वर्ण व्यवस्था यही ब्राह्मणहरुको उपज हो । यसको प्रमाण ऋग्वेदको पुरुषसत्वमा मौजुद छ । त्यसैले यस्तो झन्झटबाट यो भट मण्डली बाँचेर निस्कन कहिल्यै
सक्दैनन् । तर उनीहरुले जाति व्यवस्थाको दोरा सिन्धुवासी माथि थोपरे तर यसमा कुनै सत्यता छैन । केवल ब्राह्मणहरुको बचाउनको लागि यो असफल प्रयास गरेका हुन् । मधुकर ढंगले डेक्कन कलेजमा होइन्जेल उनले ब्राह्मणहरुको चिन्ता गर्थे । सेवानिवृति पछि उनी भण्डारकर संस्थाको सदस्य भए भाण्डारकर संस्थामा यस्तो किमिसमको षड्यन्त्र यति सजिलै गर्न सकिदैन थियो ।